၂၀၂၀ NAB ပြပွဲ - ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာဖန်တီးမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးစုရုံးခြင်း - NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲ - ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာဖန်တီးမှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစုရုံးခြင်း
အထူးသဖြင့်နည်းပညာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လျက်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောက်သောအခါတီထွင်ဖန်တီးမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းယနေ့တွင်ဖြစ်သည်။ The 2020 NAB ပြရန် ဤစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အစေခံသောဇာတ်လမ်းပြောပြသည့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ကြီးထွားရန်ဆန္ဒရှိသောတီထွင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောစုရုံးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 18, Aprilပြီလ 22 ရက်နေ့တွင် 2020 NAB ပြရန် Las Vegas, NV တွင်ကျင်းပလိမ့်မည် ၎င်းသည်နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြော်အမြင်ရှိသူများကိုအကြောင်းအရာအသစ်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနည်းဖြင့်အသက်ဝင်စေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်s။ မီဒီယာ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာတို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုတိုးပွားစေပြီးချဲ့ထွင်နိုင်သည့်နေရာမရှိပါ 2020 NAB ပြရန်.
အတော်ကြာ 2020 NAB ပြပွဲကွန်ဖရ အပေါ်အာရုံစိုက်သင်ခန်းစာများပါဝင်သည်လိမ့်မယ်
အကြောင်းအရာနှင့် Cable ကိုဆက်သွယ်မှု
တက်ရောက်သူများသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်သောလမ်းကြောင်းဖြင့်ရှာဖွေရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ တက်ရောက်လာသူများသည်ကွန်ဖရင့်၏အဓိကစီးဆင်းမှုသုံးခုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပြုလုပ်သောသင်ခန်းစာများကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်သုံးခုမှတစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တက်ရောက်သူများတက်ရောက်နိုင်မည့်ကန့်သတ်ထားသောစာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။
အဆိုပါ 2020 NAB ပြပွဲကွန်ဖရ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရွေးချယ်ဖို့တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက် 100+ ကျော်အစည်းအဝေးများရှိခြင်းနေစဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းန်းကျင်တည်ဆောက်နေကြသည်။ The 2020 NAB ပြရန်ညီလာခံ တက်ရောက်သူများအားအတွေးအမြင် ဦး ဆောင်သူ၊ ထူးခြား။ အစွမ်းထက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
2020 NAB ပြရန် All- တံဆိပ် Access ကိုအစီအစဉ်များ
အဆိုပါညီလာခံနှင့်အတူ 2020 NAB ပြရန် တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို“All- တံဆိပ် Access ကိုအစီအစဉ်များ။ ” ဤအစီအစဉ်သည်မှတ်ပုံတင်သူအားလုံးအတွက်ဖွင့်ပေးသောပညာရေးအစီအစဉ်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အခမဲ့လျှောက်ထားသောအစည်းအဝေး ၁၀၀ ကျော်ကိုတစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ကျက်နိုင်သည် Floor Show နှင့် LVCC ။
အဆိုပါ "All- တံဆိပ် Access ကိုအစီအစဉ်များ"ပါဝင်သည်
အဆိုပါ "အဓိကအဆင့်"အမြော်အမြင်ရှိသူများ, သြဇာနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင် guests ည့်သည်များအဘို့ဖြစ်၏။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိ NAB ပြသခြင်း နှင့်အတူရာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် NAB: ငါတို့ကရုပ်သံလွှင့်ပွဲတွေပါ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေဟာများစွာသောသူတွေဆီကနေသင်ယူနိုင်မှာပါ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ ပြောရမယ်ဆိုရင်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကမကြာမီလာမည်, နှင့်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် "အဓိကအဆင့်"ထို့နောက်ထွက်စစ်ဆေးပါ www.nabshow.com/education/all-badge-access-programs/main-stage
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် "ငှက်တစ်ကောင်၏ငှက်တစ်ကောင်"အစီအစဉ်သည်ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူချင်းများကိုပေါင်းစည်းသည်။ တက်ရောက်သူတီထွင်သူများအနေဖြင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအမျိုးမျိုးနှင့်လေ့လာသင်ယူရန်၊ ဆွေးနွေးရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။ ဤနှစ်ရက်တာအစီအစဉ်သည် ဦး ဆောင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစည်းအရုံးများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များမှ ဦး ဆောင်ကျင်းပသည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပါဝင်သည်။ မှာငှက်တစ်ကောင်၏ငှက်တစ်ကောင်တီထွင်ဖန်တီးသူများသည်အကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမတိုင်မီအကြောင်းအရာများကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခြင်းများနှင့်မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
ဟု ICG ပြော
အပြာရောင်ကော်လာ Post ကိုစုပေါင်း
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစုရုံးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့များနှင့်အတူ hardware နှင့် software များပံ့ပိုးပေးသူများကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့်ကမကထပြုအစည်းအဝေးများအပြင် ထပ်မံ၍ စွမ်းဆောင်ရည်များလည်းရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ “ လေ့လာရေးဓာတ်ခွဲခန်းများ” ပြတိုက်ဖွင့်သည့်သင်ခန်းစာများသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောခေါင်းစဉ်များနှင့်ပြသနာများ ဦး ဆောင်သောအစည်းအဝေးများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ်ဆွေးနွေးမှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မှာသတင်းအချက်အလက်ကြောင့်ဖြစ်သည် “ လေ့လာရေးဓာတ်ခွဲခန်းများ” ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းသည့်လုပ်ငန်းရှင်များမှလာသည်။ တက်ရောက်သူများနှင့်အတွေးခေါင်းဆောင်များကအလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။
အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ “ လေ့လာရေးဓာတ်ခွဲခန်းများ” အကောင်းတစ် ဦး ခေါင်းစတင်ရန်လာမယ့်, ပြီးတော့ထွက်စစ်ဆေးပါ www.nabshow.com/education/all-badge-access-programs/exhibitor-sponsored-programs ။
ဤသင်ခန်းစာများသည်ပြသနာများ၊ ပြခန်းများနှင့်ပြဇာတ်ရုံများကိုအဓိကထားပြီးပြသမည့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းများကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ရန်နှင့်တက်ရောက်သူများအားလုံး၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကဇာတ်စင်နှင့်ပြဇာတ်ရုံ Sessions"ထို့နောက်ထွက်စစ်ဆေးပါ www.nabshow.com/show-floor/attractions-pavilions အရာဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကအစည်းအဝေးများပါလိမ့်မယ်!
အားလုံး“All- တံဆိပ် Access ကိုအစီအစဉ်များ"၌ကျင်းပလိမ့်မည် မြောက်ခန်းမအစည်းအဝေးခန်းများ.
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အစပြုသူများသည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတများရရှိခြင်း၊ အတွေ့အကြုံရှိခြင်းတို့ဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖန်တီးမှုဆိုင်ရာတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကိုစုစည်းပေးသည်။ သင်တန်းတက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်လက်တွဲပြီးအနုပညာ၊ သိပ္ပံနှင့်အကြောင်းအရာများတိုးတက်လာသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ရုံများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ The 2020 NAB ပြရန် လာမယ့်Lasပြီ ၁၈-၂၂ မှာ NV Vegas မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ.
ယခုမှတ်ပုံတင်မည် နှင့်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့ 2020 NAB ပြရန်ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး: www.nabshow.com/.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် All- တံဆိပ် Access ကိုအစီအစဉ်များ ငှက်တစ်ကောင်၏ငှက်တစ်ကောင် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဖျော်ဖြေရေး Las Vegas မှ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ NAB 2015 NAB 2016 NAB ညီလာခံ NAB: ငါတို့ကရုပ်သံလွှင့်ပွဲတွေပါ NAB16 nabshow ဇာတ်လမ်းပြောပြ	2019-12-23
ယခင်: အငယ်တန်းစီမံကိန်းမန်နေဂျာ & ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာမန်နေဂျာ